Twin Seoul ayaa martigelin Marxaladda koowaad iyo "Aqoonsiga (shirka)" waa
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Twin Seoul ayaa martigelin Marxaladda koowaad iyo "Aqoonsiga (shirka)" waa
Twin Seoul mid ka mid ah nafta hab dhabta ah
nolosha hore si aad u hesho [3500 yen qiimaynta Free] in psychics u qaybsan yahay laba, ayaa la Dell si ay u bartaan of safarka si kor loogu qaado kasta. Twin Seoul laakiin waxa uu ahaa in inta badan waxaa loo kala qaybiyaa laba rag iyo dumar, waxay sababta oo la sheegay in si gaar ah u noqon in ay bartaan oo ku saabsan jacaylka ragga iyo dumarka.
mataanaha Seoul, ama ma inta badan ku nool yihiin marxalad la mid ah, waayo, sidoo kale waxaa u furan yahay, sida deegaanka iyo da'da, ka hor tago, laakiin jaaniska waa quruxsan yar yahay, in la kulmo sida dhif kalsooni Adduun Haa aad. Kulan
naf mataano ah, nafta iyada oo had iyo toddoba marxaladaha by maareynta caalamka ayaa isku dayaya inuu ka mid noqdo. Marka nafta ee mataanaha ah waxaa la kulmay, nafta waa marka dhamaysto reincarnation ka mid noqdaan, waxaan u baahan nahay in la sameeyo hagaajin ka dib muddo dheer oo waqti iyo marxaladda uu ku soo laabto ka mid ah gobolka asalka ah.
waa talaabada ugu horeysa ee masraxa "aqoonsi (shirka)" ayaa marar badan sheegay in kuwa dhadhamin dareenka ruuxiga ah.
mataanaha Seoul oo la kulmay
? naftiisa si xoog leh waa la iswaydiiyo si ay u dhadhamiyaan dareen aad u daran marka, marka aan la
nafta mataano la kulmay in la xusuusto farxadda, iyo Diplomasiyiinta ogyahay ay joogaan, weli kulanka ugu horeeya. Markii aan la kulmay, taas oo inta badan waa ay weerareen muraaqooda, sida waxaa marna la kulmay xitaa ka hor, dareen in ay tahay dareen aad u daran halkii waxyaabaha sida bartey. qeybtii hadda dambe la kulmay ee jirka ma ahan mid farxad waxaa u muuqday in aan soo muuqan doono dushiisa oo dhan.
? marka la kulmay
mataanaha Seoul in ay ku lug leeyihiin agagaarka in search of dhinaca kale, dhinaca kale lagu sheegay doonaa ka badan markii aan la kulmay dad kale orod raadka cad u kala duwan. ma maamuli kartid in naftu kasta oo kale oo soo jiidan si adag on iyaga u gaar ah, taasoo mararka qaar keenta Tsuppashi 'raadinaya lammaane, ubucda dadka iyo deegaanka marka ay tallaabo Waxa kale oo jira in ay ku lug leeyihiin. In
? gobolka ruuxa soo jeedo
Marxaladda koowaad, naftii kasta oo kale oo xagga ruuxa waa xaalad soo jeedo. Soul kasta oo kale iyo mid kasta oo la aqoonsado kale, waxaan midba midka kale u tagaan si loo kordhiyo heerka nafta. Sidaa darteed, waxaa la weeraray by dareen ma jiraan wax si Aragai naftooda.
marxaladda koowaad ee kulanka Seoul oo mataano waa la joogo
mataanaha Seoul soo jiidan heer Naf la joogo waqtiga si loo soo jiito kasta oo kale oo heer Naf shishadiisa meel iyo shakhsiyadda ee midba midka kale, sababta oo ah sida ay u. la joogo, laakiin sidoo kale inta badan waa nooc ka mid ah jacaylka arko koowaad, ma aha oo keliya sababo la xiriira inuu sababtoo ah waa jecel yahay eegno, sensuously iyo u yimaadeen inay u simbiriirixan maskaxdiisa, noqon in la heysatay by dareen galay waa.
in kasta oo kale oo aad u raaxo garashada in dareen, aad xusuusataan muraaqooda iyo farxad aan la macnayn karaa by maanka. Waxa ay noqon doontaa cadayn in kasta oo kale dareemaan kasta oo kale in nafta. Dadka qaarkood, waxaa kale oo uu sheegay inay ku raaxaystaan ??dareenka, sida goor wanaagsan xagga samada. waxaa Haddii aad naftaada by bilaabo kulanka ugu horeeya weeraray by dareen la yaab leh la koontarooli karin, laga yaabee qofka in uu yahay naf mataano.
Re waa, waxa uu noqon lahaa caddayn in kasta oo kale dareemaan kasta oo kale in nafta. Dadka qaarkood, waxaa kale oo uu sheegay inay ku raaxaystaan ??dareenka, sida goor wanaagsan xagga samada. waxaa Haddii aad naftaada by bilaabo kulanka ugu horeeya weeraray by dareen la yaab leh la koontarooli karin, laga yaabee qofka in uu yahay naf mataano.